Ngwa: Mgbasa ozi ime ụlọ & n'èzí, ihe ngosi, ihe ngosi, mmemme, ngosi, nkwalite, agbamakwụkwọ, nnọkọ, ụlọ ọrụ foto, ọgbakọ mgbasa ozi, nzukọ ọmụmụ, ọkwa, ihe nkiri wdg.
Banner akpa azụ X na-eji otu akpa azu nke deluxe, ihe dị arọ 3D-ụfụfụ azụ panel nwere oghere na ọwa ikuku na-asọpụta, eriri na-agbanwe agbanwe, ndị a na-eme ka onye nwe ya nwee ahụ iru ala; nwere akpa na-enyere gị aka ịchekwa akwụkwọ ozi ahịa, na-ahapụ onye na-eyi ya aka n'efu.
Knapsack nkwalite a gụnyere obere akpa maka nchekwa nke okporo osisi X. Ọkọlọtọ dị mfe ịtọlite ​​​​, naanị tinye ogwe osisi X banner na akpa azu wee jikọta ọkọlọtọ nwere grommets n'akụkụ akụkụ ọ bụla (ọkọlọtọ adịghị etinye) na nko na njedebe nke okporo osisi ọ bụla.
Mgbasa ozi mkpanaka akpa azụ mmadụ bụ ụzọ dị egwu isi pụta ìhè na oghere siri ike yana ịdọta uche nke ndị ahịa nwere ike ịbawanye okporo ụzọ na ire ahịa na mmemme ọ bụla, ihe ngosi ahia ma ọ bụ ihe ngosi.
Ngwaahịa patent, ihe nrụpụta ọkọlọtọ na-ebunye imewe. WZRODS zuru ụwa ọnụ hibere ya
Ogwe azụ 3D-ụfụfụ nke dị arọ kpụrụ akpụ nwere oghere ma kwe ka imepụta ọwa ikuku na-eruba, na-enye ahụ iru ala site na iji ahụmịhe.
Ogwe dị na eriri carbon mejupụtara, ike dị elu & siri ike karịa aluminom ma ọ bụ ogwe eriri enyo
Akpa azụ X 120cm * 50cm 1.2KG 54*30.5*5.5CM
Nke gara aga: Ọkọlọtọ akpa akpa & akara
Osote: Mmiri mmiri